Adana Mersin Zụọ 2019 - RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region01 AdanaAdana Mersin na-azụ oge na tiketi tiketi
02 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 01 Adana, 33 Mersin, Mediterranean Region, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Turkey 0
oge ụgbọ oloko azụ
Adana Mersin Train Tiketi na Ahịa tiketi 2019. Adana bụ akara kachasị eji n’etiti Mersin na Mersin State Railways. Nkezi Oge Njem 45 na-ewe nkeji. Oge ọkọchị na udu mmiri, n'agbanyeghị mkpọsa Adana Mersin na-amalite n'ụtụtụ 6: 00 23: 15 'ruo mgbe ọ ga-aga n'ihu. Njem ikpeazụ n'etiti Mersin na Adana na-eme n'abalị 22: 30.
A na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè 11 ma ọ bụ ọbụna na njem ụgbọ okporo ígwè 28 kwa ụbọchị. Adana Mersin Zụọnụ tiketi adịghị na ịntanetị ma ọ bụ n'ọdịnihu. Ya mere, ị nwere ike ịnweta tiketi gị site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè n'ụbọchị njem. Ọ ga-aba uru ịnọ na nkwụsị ihe dịka minit 15 tupu oge ụgbọ oloko, ọbụna na oke ike. N'aka nke ọzọ, ụgbọ elu Raybü na-arụ ọrụ n'etiti Adana na Adana mgbe niile.
Adana Mersin Adana Mpaghara Train
Ridegbọ okporo ígwè si Adana ruo Mersin na-ewe ihe dị ka awa 1 na nkeji 10. Insgbọ ndị a na-arụ ọrụ kwa ụbọchị n'etiti Adana na Mersin.
Adana Mersin Railway Line Train Station
Adana Enyemaka Pụrụ Iche
Adana Mersin 2019 Ahịa Tiketi: Zuru ezu: £ 7.5 Nwa akwukwo: 6.25 Tiketi TL laghachi: 12 TL
Adana Tarsus 2019 Ahịa Tiketi: Zuru ezu: £ 5.5 Nwa akwukwo: 4.5 Tiketi TL laghachi: 9 TL
Adana Yenice 2019 Ahịa Tiketi: Zuru ezu: £ 4 Nwa akwukwo: 3 Tiketi TL laghachi: 6 TL
Adana Mersin 2019 ndenye aha (kwa ọnwa): zuru ezu: £ 150 Nwa akwukwo: £ 120
Adana Mersin na-azụ izu
CDLỌ NGWA NA NGWU:
Nọmba ụgbọ oloko igbe igbe ekwentị.
ỌT TRT. ADANA TRAIN STATION CONTACT
NJIRUTA MARAİN AKAINKỌ MERSATIONN
2019 High Speed ​​Current High Speed ​​Train Schedules na Nhazi 04 / 08 / 2019 Oge ihe nrịba nke tiketi ugbu a dị elu na oge njem ụgbọ elu: Oge ụgbọ elu dị elu nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ elu na-aga n'ihu na-ejikọ obodo, ndị njem na ọdịbendị dị iche iche. A na-eji ụgbọ oloko na-agba ọsọ dị elu na-eje obodo dị iche iche nwere njiri njem dị iche iche na ụdị ụgbọ ala na nnukwu ofufe ma nwee atụmatụ teknụzụ dị elu. CDgbọ njem TCDD na-enye gị ohere njem a na-agaghị echefu echefu site na ijikọ ihe niile na mmepe nke teknụzụ na mpaghara a n'ụzọ kachasị ọsọ. Nwere ike iru obodo a obere oge karịa ụgbọ ala ma gaa njem akụ na ụba…
Konya Adana kụziere oge na 2019 tiketi 02 / 06 / 2019 Kedu oge bụ usoro ụgbọ oloko maka Adana - Konya? Kedu oge ụgbọ okporo ígwè si Adana ruo Konya? Ego ole maka tiketi ụgbọ oloko? Ego ole ka oge ụgbọ oloko na ugwo? Kedu mgbe na mgbe ị ga-azụta tiketi ụgbọ oloko? Na ozi anyị, ị nwere ike ịchọta azịza nye ajụjụ ndị a. Ọ na-ebupụta ụgbọelu Toros Express n'etiti Adana na Konya kwa ụbọchị. 07.45 ọta ụgbọ mmiri si Adana bịarutere na Konya na 13.32. Ụgbọ mmiri ahụ na-aga site na Konya ruo 14.30 rutere na 20.17 na Adana. Adana na Konya n'etiti njem oge ụgbọ okporo ígwè bụ banyere 5 47 nkeji awa. Tiketi ụgbọ okporo ígwè Adana - Konya bụ ọnụahịa nke 21.00 TL. Ụmụ akwụkwọ na ụgbọ oloko, agadi, pịa, onye nkụzi TSK ndị ọrụ
Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ 18 / 11 / 2013 Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ: Otu ụgbọ okporo ígwè dị elu nke na - arụ ọrụ n'etiti Eskişehir na Ankara na - arụ ọrụ na 16.35 si Eskişehir tinyere nkwụsị nke ọ bụla na 1 na Polatlı. Ọ bụrụ na ndị njem zuru oke, a ga-enwe njedebe na-adịgide adịgide. Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ahịa bụ 25 TL 12 bụ ihe na-erughị 12.5. Ụmụaka nọ n'okpuru afọ 7 nwere ike ịbanye n'ezinụlọ n'enweghị tiketi. Ahịa nke Intanet bụ 35 na 17.5 TL. Ị nwere ike ịnweta tiketi na ịntanetị site na ịpị bọtịnụ bọtịnụ bọtịnụ n'elu. Ntinye akwụkwọ na ngwa ngwa: enwere ike ime site na ekwentị. Ma ọ bụrụ na ị na-atụle ntinye akwụkwọ e, ịkwesịrị ka ị bụrụ otu. TCDD - Intanet-Ndebanye aha Njikwa maka mgbakwunye ntinye aka
Eskisehir Konya Eskisehir zụọ Lines na tiketi Ahịa 02 / 04 / 2013 Eskisehir na Konya, Eskişehir High Speed ​​Train Shuttle Awa Ticket Prices Eskisehir-Konya YHT njem oge n'etiti obodo abụọ na mmalite nke oge 1 50 nkeji awa, njem oge n'etiti Konya na Bursa ga-ada na 4 awa. Eskişehir Konya, Eskisehir YHT Line njem ese na akpa ebe n'etiti Eskisehir na Konya Tee site na ụbọchị 4 ga-ẹkenịmde kwa 24.03.2013 oge ESKİŞEHİR - Konya - ESKİŞEHİR n'etiti arụ ọrụ elu na-agba ụgbọ oloko na ọtụtụ awa kwa ụbọchị na-arụ ọrụ ESKISEHIR si Mbula awa: Eskişehir K: 08.00 - Konya V: 10.00 Eskisehir K: 16.00 - Konya V: Mbula awa 18.00 si Konya Konya K: 09.35 - Eskisehir V: K Konya 11.35: 18.55 - Eskisehir ...
Konya Istanbul ụgbọ oloko na tiketi Ahịa 17 / 12 / 2014 Konya Istanbul ọsọ ọsọ ụgbọ oloko na ụgwọ tiketi: Konya Istanbul YHT flights malitere taa site na ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ si Istanbul Konya 4 awa na 15 nkeji. KONYA ISTANBUL SEPTEMBER HERE A ga-enwe ụgbọ elu Konya-Istanbul YHT (ụgbọ elu dị elu) kwa ụbọchị dịka nlọpụ 2 na 2 laghachi. Dị ka ozi nke Minista Ụgbọ njem, Lutfi Elvan si kwuo, ụgbọ okporo ígwè ga-amalite site na 6.10 na 18.35 awa na Konya. Istanbul Konya nnukwu ụgbọ oloko ga-eme na 07.10 na 18.30 awa site na Pendik. ISTANBUL KONYA YHT STORES N'etiti Istanbul na Konya, ụgbọ elu dị elu na 4 awa dị na İzmit, Arifiye, Bozüyük, Eskişehir na İSTANBUL
Ụgbọ njem Adana Mersin Raybüs
Adana Mersin na-azụ 2019 oge
Adana Tarsus zụrụ tiketi
Oge Traana Adana
Adana Yenice na-azụ ụgbọ oloko
Mersin Adana tiketi Ahịa
Mersin Adana na-azụ oge
Oge Mersin na-azụ 2019
Ndị ọkacha mmasị na Çankaya
Shell & Turcas si Turkey ọgidigi azụ Injury Association na Cooperation
Konya Adana kụziere oge na 2019 tiketi
Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ
Eskisehir Konya Eskisehir zụọ Lines na tiketi Ahịa
Konya Istanbul ụgbọ oloko na tiketi Ahịa